Ka qaybgal Kulleejada Saaxiibtinimo ee Milatariga iyo Halyeeyga »Hodges U
Guriga Gudihiisa ama Dibaddiisa, Waxaan Taageernaa Militarigeenna!
Jaamacada Hodges, waxaad kuheli doontaa in saaxiibtinimada militariga aysan kaliya aheyn wax aan dhahno, waa heer taageero ah oo aad uga fog fasalka. Laga soo bilaabo xarumihii halyeeyga ahaa, gawaarida la doorbiday, barnaamijyada gaarka ah, iyo adeegyada taageerada socota, waxaan ku dayaneynaa balanqaadkeena adiga iyo qoyskaaga laga bilaabo dareenka ugu horeeya ilaa heerarka fulinta.
Intaa waxaa sii dheer, waxaa naloo aqoonsaday a 2019-2020 Iskuulka Saaxiib Milatari ee Dahabka ah, 2018-2020 Waqtiga Milatariga ee ugu Fiican Kuliyada Vets, Kaqeybgalaha Jaalle Ybon, Ku dheji 911 GI Bill® iyo Iskuulka Labada Lamaane ee Saaxiibtinimada Leh u hibeyntayada si aan u hagaajino nolosha dadka Milatariga Firfircoon, Veterans, Iyo Qoysaska Milatariga.
Hodges waa xulasho sare oo loogu talagalay ardayda militariga iyo halyeeyada
Manhajka Shaqaalaysiinta Shaqada.
Kaqeybgalaha Jaalaha Jaarka ah.
Xarumaha Milatariga / Halyeeyga ah Xarumaha Halyeeyga ah.
Boqolkiiba 12 Dhammaan Ardayda Waxay Ka Soo Shaqeeyeen Milatariga.
Hal Fasal Bishiiba Hyper Format Diirada Leh halka loo oggol yahay Isqorista Buuxda ama Qayb-dhiman.
Shahaadooyinka gundhigga ah gudaha Barnaamijyada Degree.
30 Years U adeegida Tacliinta Sare ardayda.
Fasallada la bixiyo Online, Xerada-xerada, Isku duubay, ama TEC qaabab. Fasallada TEC waxay kuu oggolaanayaan xorriyadda aad fasallada qaarkood toos uga qaadan karto meel kasta oo adduunka ah.
Halyeey Kaalmeeya Fasalka
Jaamacadda Hodges waxay ku faantaa ardaydeena militariga iyo halyeeyada waana ay muujineysaa. Laga soo bilaabo meelaha gawaarida la dhigto ee saaxiibtinimada ku habboon ee loo qoondeeyay qolalka loogu talagalay, waxaan aaminsanahay in aan siino jawi raaxo leh ciidankeenna iyo halyeeyadeenna halyeeyada ah inta aan ku jirno xarumahayada.
Intaas waxaa sii dheer, waxaan bixinaa adeegyo taageero, ka caawinta nidaamka dalabkeena, gargaarka gaarka ah ee kaalmada maaliyadeed ee gaarka ah, iyo ka caawinta naqshadeynta dariiqa guushaada. Waan ognahay kala-guurka askarta iyo ardaygu had iyo jeer ma sahlana laakiin waxaan kula jirnaa tallaabo kasta oo aad qaaddo.
Taageerada Qoyska ee Milatariga
Waxaan soo dhaweyneynaa xaasaska iyo qoysaska militariga ah ee raadinaya taageero iyo meel ay guryahooda ugu wici karaan inta ay ehelladoodu ka shaqeynayaan ciidamada. Ahaanshaha a Kulliyadda Saaxiibtinimada Sare ee Sare, waxaan u fidinaa qaar badan oo ka mid ah adeegyada ay heli karaan halyeeyada qoysaskooda sidoo kale.
Haddii adiga ama qoyskaaga aad u baahan tihiin taageero iyo in laga caawiyo xagga dhaqaalaha, shaqo raadinta, la-talinta caafimaadka maskaxda, ama taageerada ku-meel-gaarka ah, waxaan halkan u joognaa inaan dhammaantiin idin caawinno. Kheyraadka waxaa laga heli karaa xerada gudaheeda iyo bulshada dhexdeeda. Kheyraadkaani waxay bixiyaan xalka ku dhowaad caqabad kasta oo aad la kulmi karto xubin hore uga tirsanaan jirtay ciidanka. Waxaan bixinaa barnaamijyo shahaadada waqti-buuxa iyo waqti-dhiman ah, qaar badan oo aad internetka ka qaadan karto. Marka xitaa haddii aadan hubin inta aad ku sugan tahay aaggeenna, weli waad dhammayn kartaa shahaadadaada. Waxaan diirada saarnay guushaada, waxaan halkaan u joognaa inaan kaa caawino abuuritaanka nolosha aad qiyaasi karto.
Barnaamijyada Degree ee ugu kulul Ardayda Milatariga:
Barnaamijyada Darajada Internetka
Caawinta Waxbarashada ee Ardayda Milatariga iyo Halyeeyada
Adeegsiga Faa'iidooyinkaaga VA
Hodges ahaan, waxaan ognahay sida ay muhiim kuugu tahay inaad sida ugu fiican uga faa'iideysato Faa'iidooyinkaaga VA. Waxaan khibrad u leenahay inaan kaa caawino inaad maamusho nidaamka dalabka GI Bill post ee 9-11 kadib. Haddii aad u-qalanto 100% faa'iidooyin ama heer faa'iidooyin kale ah, waxaa naga go'an inaan kaa caawinno inaad hesho inta ugu badan ee suurtogalka ah ee waxbarashadaada. Taasi waa sababta aan sidoo kale uga qaybgalno Barnaamijka Ribbon Yellow oo ay bixiso Waaxda Arimaha Halyeeyada oo ka caawisa soo koobida farqiga udhaxeeya 9-11 GI Bill® oo ubaahan maalgalinta waxbarashadaada sare.
Dhammaan xubnaha adeegga waajibaadka firfircoon waa inay la hadlaan Sarkaalkooda Adeegga Waxbarashada ama la-taliyaha milatariga si loo helo oggolaansho ka hor inta aan la qorin Jaamacadda Hodges. HU ogolaanshaha iyo la taliyayaasha kaalmada dhaqaalaha ayaa sidoo kale la heli karaa si looga jawaabo wixii su'aalo ah ee aad qabto.
Qiima dhimista Waxbarshada Milatariga
Markaad doorato Hodges, waxaad heli doontaa a dhimista waxbarashada oo ah $ 100 saacaddii amaahda ee halyeeyada aan u qalmin dheefaha waxbarashada VA ama qiimo dhimis waxbarid dheeraad ah. Halyeeyada badankood waxay helaan faa'iido waxbarasho inta udhaxeysa 40 iyo 100 boqolkiiba.
Waxaan sidoo kale siinaa qiimo dhimis waxbarid militariga firfircoon Na waydii sida aad ku heli karto $ 250 hoos u dhac halkii saac ee deynta ah heerka waxbarashadeena caadiga ah.
Intaa waxaa sii dheer, Shaqaalaheena xirfada leh ee VSC ayaa si adag u shaqeyn doona si ay kaaga caawiyaan aqoonsiga gargaar dhaqaale taas oo aad uqalanto si aad uqaado talaabada xigta ee lagu gaaro Guushaada. Waxaan ka mid nahay tiro xul ah oo jaamacado ah oo adeegyo u fidiya halyeeyaasheena militariga, waxaana ku faraxsanahay inaan halkaan u joogno inaan kuu adeegno adiga oo qaadaya talaabada xigta ee wadadaada xirfadeed.
Lacagta Caawinta Lacagta Milatariga
Lacagta Caawinta Waxbarashada (TA) waa isha gaarka ah, isha gaarka ah ee gargaarka maaliyadeed ee ay heli karaan xubnaha Adeegyada u-qalma. Macaashka TA waxaa lagu dabaqayaa xisaabaadka ardayga kahor intaan lagaarsiin wax kaalmo dhaqaale oo dheeri ah oo ardaygu uqalmo inuu helo
Ardayda waxaa sidoo kale lagu dhiirigelinayaa inay codsadaan gargaar lacageed si loo go'aamiyo ilaha kale ee ay xaq u leeyihiin inay helaan. Si aad u hesho kaalmada maaliyadeed ee federaalka, gobolka, iyo hay'adaha (oo ay ku jiraan deeqo badan), buuxi Codsiga Bilaashka ah ee Gargaarka Ardayga ee Federaalka (FAFSA). Si aad u codsato kaalmada maaliyadeed, waxaad u baahan doontaa inaad ka abuurto Aqoonsiga Gargaarka Ardayga ee Federaalka ama Aqoonsiga FSA ee ah Websaydhka FSAID kuna soo gudbi FAFSA halkan fafsa.ed.gov.
Ha ka welwelin haddii Caawinta Waxbarashada ama Gargaarka Maaliyadeed ay u muuqato mid wareersan. Shaqaalaha Xarunta Adeegyada Halyeeyada Hodges waa halkan si aan kuu caawiyo oo ay weheliso Caawintaada Waxbarshada waxayna kugu hagi doontaa nidaamka maalgelinta waxbarashadaada. Waad sameyn kartaa tan!
Caawinta Lacagta Cirka
Waxaad ka dalban kartaa Caawinta Waxbarshada qadka internetka Xarunta Waxabarashada Cilmiga Hawada. Waa inaad sameysid magac isticmaale iyo eray sir ah kahor intaadan marin codsiga TA ee khadka tooska ah.
Si aad u dalbato TA, raac talaabooyinkan:
Xulo Sababta Codsiga
Xulo Magaca Dugsiga
Gali Taariikhaha Muddada
Gali Macluumaadka Koorsada
Gali Kharashka Diiwaangelinta
Xaqiiji TA Information oo Gudbi Codsi
Ka dib marka la aqbalo codsigaaga, waxaad heli doontaa ogeysiiska foomka TA ee la ansixiyay. Foomka la ansixiyay wuxuu yeelan doonaa labada saxiix ee la ansixiyay. Ugu dambeyntiina, waxaad u baahan tahay inaad u dirto nuqul ka mid ah foomka TA ee la oggolaaday Xafiiska Khasnadda.
Dalbo Kaalmada Casharka Cirka ee Cirka
Kaalmada Waxbarashada Ciidanka
Codso Caawinta Waxbarashada
Ka dib marka la aqbalo codsigaaga, waxaad ka heli doontaa ogeysiis GoArmyEd.
Haddii codsiga TA aan la oggolaan, GoArmyEd waxay ku siin doontaa sabab iyo sidoo kale xulashooyin.
Ugu dambeyntiina, waa inaad u dirtaa nuqul ka mid ah foomka TA ee la oggolaaday Xafiiska Khasnadda.
Codso Kaalmada Waxbarashada Ciidanka
Kaalmada Waxbarashada Navy
La xiriir la-taliyahaaga Navy College si aad u hesho la-talin waxbarasho iyo inaad go'aamiso koorsooyinka laga codsan doono Kaalmada Waxbarashada.
Buuxi foomka Codsiga TA oo ku noqo Xafiiskaaga Navy College si aad ugu shaqeyso.
Booqo Websaydhka Navy College Wixii macluumaad dheeraad ah.
Codso Kaalmada Waxbarashada Navy
Taageerada Waxbarshada Marine Corps
Waa inaad codsataa oo aad ka heshaa oggolaansho qoraal ah TA oo loo maro xafiiska waxbarashada ee ku habboon diiwaangelinta ka hor.
Booqo usmc-mccs.org Wixii macluumaad dheeraad ah.
Dalbo Caawinta Waxbarshada Marine Corps
Caawinta Waxbarshada Xeebta Xeebta
Machadka USCG iyo Xarunta Horumarinta Xirfadeed ee Tababarka Ciidamada Badda ee Mareykanka iyo maareynta Caawinta Waxbarashada.
Machadka Ilaalada Xeebaha ayaa ansixiya Codsiga TA waxayna soo saaraan foomka Ogolaanshaha TA.
Waa inaad u dirtaa nuqul ka mid ah foomka TA ee la ansixiyay Xafiiska Khasnajiga.
Booqo: the Websaydhka Navy College ama Websaydhka Faa'iidooyinka VA Wixii macluumaad dheeraad ah.
Codso Faa'iidooyinka VA
Foomamka Kale ee Caawinta Waxbarashada
Kaalmada waxbarashada maahan isha kaliya ee gargaarka maaliyadeed ee ay heli karaan ardayda militariga iyo kuwa halyeeyada ah. Waxaa jira dhowr nooc oo gargaar lacageed, oo ay ku jiraan deeqo iyo deeqo waxbarasho, shaqo-barasho, iyo amaah.
Barnaamijyada Gargaarka Maaliyadeed ee la heli karo waxaa ka mid ah:
Deeqda Fursadaha Waxbarasho ee Dheeriga ah ee Federaalka
Deeqda Caawinta Ardayda Florida
Barnaamijka Deeqda Mustaqbalka Bright ee Florida
Jaamacadda Hodges Deeqo
Daraasadda Shaqada ee Federaalka
Amaahda Ardayda / Amaahda Tooska ah ee Ardayda
Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo Hodges U bogga kaalmada dhaqaalaha.
Wax Ka Baro Gargaarka Dhaqaalaha ee HU
Dr. Peter Thomas Xarunta Adeegyada Ciidamadii Hore
Markaad booqato Jaamacadda Hodges, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad waqti kubixiso Xarunteena Adeegyada Halyeeyada (VSC) halkaas oo aad adigu iska arki karto sida ay noloshu tahay Hodges. Hadafka Dr. Peter Thomas Veterans Services Center waa in ay siiso jawi soo dhawayn iyo macluumaad leh halyeeyadayada iyo qoysaskooda. Xafiiskayaga Adeegyada Halyeeyada (VSC), waxaad ka heli doontaa taageero iyo macluumaad la xiriira maalgalinta waxbarashada iyo sidoo kale hagitaan ku saabsan la qabsiga nolosha ardayda iyo rayidka. Haddii aad tagtid xarumaha Naples ama Fort Myers, ama xitaa khadka tooska ah, waxaad ka heli doontaa Shaqaalaha Xarunta Adeegyada Veterans oo diyaar u ah inay ku caawiyaan.
Muxuu VSC ee Hodges muhiim u yahay? Waxaan ogaanay in mid ka mid ah caqabadaha ugu waa weyn ee ardaydeena halyeeyga ah ay la kulmaan ay tahay helitaanka dareen lahaansho iyo ujeedo. Waxaan fahansanahay in halyeeyo badan ay seegeen saaxiibtinimadii ay dareemeen inta ay kujireen adeega ayna ogaadeen inaad iskudayeyso inaad ogaato talaabada xigta ee noloshaada. Naso, marka aad dib ula degto nolosha shacabka, waxaad ku jirtaa shirkad wanaagsan. Earl Hodges, oo magac u leh jaamacadda, wuxuu ahaa ruug-caddaa oo wuxuu aad u jeclaa inuu siiyo waxbarasho heer sare ah oo halyeeyadeenna ah, in badan oo ka mid ah wakiillada, macallimiinta, iyo shaqaalaha Hodges U waa halyeeyo sidoo kale
Shaqaalaha Xarunta Adeegyada Veterans Services waxay halkaan u joogaan inay kaa caawiyaan marxaladdan kala guurka ah iyadoo la siinayo meel ay bulshadeena milateri kula kulmaan kana wada hadlaan khibradooda. Fursadda aad ku baraneyso xubnaha kale ee adeegga militariga ayaa kaa caawin doonta inaad hesho dareenka lahaanshaha ee aad u baahan tahay si aad ugu guuleysato yoolalkaaga tacliinta sare.
Kumaa ahaa Dr. Peter Thomas?
Waxaan ugu magac darnay Xarunteena Adeegyada Halyeeyada Dr. Peter Thomas, oo ah sheekeeye abaalmarin ku guuleystay iyo halyeeygii Dagaalkii Dunida II oo sidoo kale ahaa Naples Degane laga soo bilaabo 1996 ilaa 2016. Sanadkii 1943, markuu dhamaystay dugsiga sare, wuxuu ku biiray Ciidanka Mareykanka oo u adeegay oo ay la socdaan Qeybta Koowaad ee Ciidanka lugta shan ololeyaal Yurub ah. Thomas wuxuu ku helay abaalmarino badan shaqadiisa, oo ay ku jiraan shan xiddigood oo dagaal ah, mid ka mid ah olole kasta, Bronze Star, Purple Heart, Unit French Croix de Guerre, and the Belgian Fourragère.
Thomas wuxuu 13 sano ku qaatay barxadda wararka ee CBS ka hor inta uusan u ambabixin inuu ku sii wado dukumiintigiisa iyo shaqadiisa sheeko-sheegashada ah ee waqtiga-buuxa ah. Thomas wuxuu sii waday shaqadiisa sheekada wuxuuna siiyay cod-kabadan shaqooyin badan oo xayeysiis telefishan ah iyo barnaamijyo, dokumentiyo, iyo shabakadaha isboortiga sida ESPN Xitaa wuxuu siiyay codka Philips HeartStart otomaatig ah oo qalab dibadeed ah (AED).
Jacaylka Thomas ee kuwa u adeegaya militariga waligiis ma joogsan, 2004-tii, Hodges wuxuu ugu magac daray Bani'aadamnimada Sanadka. Isla sannadkaas, waxaa sidoo kale loo magacaabay Dhakhtar sharafeed ee Waraaqaha Aadanaha. In kasta oo Peter dhintey Abriil 2016, dhaxalkiisa wuxuu ku sii noolaa Peter iyo Stella Thomas Scholarship, oo siisa taageero maaliyadeed halyeeyada milateriga ee daba socda shahaadada koowaad ama mastarka.
Christin Olsen: Halyeeyga Dagaalanka iyo Proud Hodges U Qalinjabinta
Maxay tahay caqabadda ugu weyn ee soo wajahday sideese uga guuleysatay?
Hawlgabnimadaydii caafimaad aad ayey iigu adkaatay inaan ka gudbo. Muddo bilo ah ayaan ku qaatay guriga anigoo hoos u dareemaya oo aan dareemayo sidii in noloshaydu ay dhaaftay 30 sano. Waxaan lahaa qorshayaal iyo himilooyin gaar ah noloshayda. Hawlgab caafimaad ka dib shaqadii aan aad u jeclaa kamana mid ahayn. Maalin maalmaha ka mid ah, intii aan ku jiray jiifka, goor duhur ah, waxaan arkay wiilkayga oo matalaya waxa aan sameynayo waana taas markii ay i taabatay - kani ma ahan haweeneyda aan doonayo in wiilkeyga uu eego. Marka, waxaan bilaabay baaritaanka kuliyadaha maxalliga ah waxaanan jeclaaday Jaamacadda Hodges. Noloshu aniga igama dhamaan, ee waa ay bilaabaneysaa! ”
Maxay adiga macnahoodu tahay inaad kahelayso Hodges?
“Micnaheedu waa wax badan. Waxaan dareemayaa inay furi doonto albaabbo aad u tiro badan waxayna iga caawin doontaa inaan helo xirfad cusub oo aan jeclaan doono. Waxaan dareemayaa inaan ku faraxsanahay mustaqbalkeyga iyo waxa uu hayo oo dhan. ”
Waxaan u fidinaa barnaamijyo waxbarasho iyo sidoo kale barnaamijyo Xarunta Veterans Center loogu talagalay ardaydeena militariga iyo qoysaskooda. Haddii aad jeclaan lahayd inaad taageerto halyeeyadeenna, riix halkan si aad wax ugu darsato:
Xarunta Xiriirka Halyeeyada
4501 Boulevard Colonial, Fort Myers, FL 33966
La xiriir Adeegyada Halyeeyada